China Valve Butterfly Valve mveliso kunye nabenzi | Hongbang
SS nesonkana esisicaba Butterfly Valve
1 UMZIMBA ICF8 / CF8M 1
3 IDISKI ICF8 / CF8M 1
5 UKUHLAWULA PTFE / nobhedu 5
6 ORING I-NBR 3
7 NGOKUGQIBELA I-SS304 / SS316 1
UMGANGATHO Uyilo lweKhowudi I-API 609 / EN 593
UKUHLOLA NOKUVAVANYA I-API 598 / EN 12266
UMGANGATHO WOKUPHELA I-PN10 / 16 150LB 10K
UBUSO NGOBUSO I-API 609 / EN 558
Uyilo ngokwe-API 609 / EN 593
Ukuqina kwezi ndlela zombini. Uhlobo lweLug ngeendlebe ezinomsonto
Umkhono oguqukayo olungiselelwe ukumila komzimba uqinisekisa ukusebenza kancinci kwetorque. Isiqu esisezantsi nesisezantsi esinika umlinganiso wokuhamba okuphezulu, idiski eyakhiwe ngomda ngokunika i-torque ephantsi kwaye eqhelekileyo. Isiqu esingenakuthelekiswa nanto, isinyuko esinyukayo ngokwe-ISO 5211.
Ukuveliswa ngokweemfuno zaseYurophu
isikhokelo 2014/68 / EU «Izixhobo eziphantsi koxinzelelo»: modulate H. Ubuso ngobuso ngokwemigangatho yeNF EN 558 serie 20, ISO 5752 série 20, DIN 3202.
Ukunyuka ngee-flanges PN10 / PN16 / 150LB / 10K ukusuka kwi-DN50 ukuya kwi-DN600 ukusuka kwi-DN200 ukuya kwi-DN300 ngokwe-API 609 / EN 1092-2.
Uvavanyo loxinzelelo ngokwemigangatho ye-API 609 / EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 kunye ne-ISO 5208
Sinegama elihle kwiimveliso ezisemgangathweni ezizinzileyo, ezifunyanwa kakuhle ngabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya. Inkampani yethu iya kukhokelwa ngumbono wokuba "Ukuma kwiimakethi zasekhaya, Ukuhamba kwiiMakethe zamazwe ngamazwe". Sinethemba lokuba singenza ushishino nabathengi kokubini ekhaya nakumazwe aphesheya. Silindele intsebenziswano enyanisekileyo kunye nophuhliso oluqhelekileyo!
Abasebenzi bethu babambelela kumoya othi "Intembeko-esekwe kunye noPhuhliso oluSebenzisanayo", kunye nomxholo "woMgangatho wokuDidi lokuQala ngeNkonzo eNcomekayo". Ngokweemfuno zomthengi ngamnye, sinikezela ngeenkonzo ezenziwe ngokwezifiso kunye nezakho ukunceda abathengi bafezekise iinjongo zabo ngempumelelo. Wamkele abathengi abavela ekhaya nakwamanye amazwe ukubiza kunye nokubuza!
Egqithileyo I-Valve yebhola ye-SS Lug
Okulandelayo: I-Valve yentsimbi ephindwe kabini
Brass nesonkana esisicaba Butterfly Valve
Ibhabhathane lokujonga iValve
Ibhabhathane yeLug Khangela iValve
Butterfly Swing nesonkana esisicaba Non Return Valve
Uhlobo lwe-Butterfly Check Valve
Esilucwecwana Butterfly Khangela Valve
Isonkana esisicaba Uhlobo engenazihlalo Seat Butterfly Valve
I-Butterfly Vug yelungu
Ukuphela kweGreen Butterfly Valve
I-Valve yebhola ye-SS Lug
UPVC Butterfly Ivaluva
Esilucwecwe Butterfly Valve Fire